Gonyoina - Wikipedia
(Redirected from Gonyaina)
Muchidzidzo chePimanyika gonyoina imhando yegonyozhinji ine mativi mana nemakonyo mana. Makonyo emukati megonyoina anohwerengedzwa kusvika pa 360o.
gonyoina dzemhando yegonyoina SambambaEdit
gonyoina sambamba chiumbwa chine mativi mana; mativi maviri akatarisana anenge akati sambamba uye anenge akaenzana. makonyo maviri akatarisana anenge akaenzana. Zvimwe zvinoonekwa ndezvekuti guramakonyo mbiri dzinochekana kuita zvikamu zviviri zvakaenzana. Zviumbwa zviri mumupanda wegonyoina sambamba zvinosanganisira: skweya; gonyoina tsazamativi uye gonyoina tsazamakonyo.
Skweya (Square) iri shoko rinoreva chiumbwa chine mativi mana ose akaenzana negonyo ina dzose dzakaenzana. Skweya iri pamupanda wegonyoina.
Gonyoina tsazamativi (Rhombus) - iri izwi rinoreva gonyoina rine mativi akaenzana nhambwe. gonyo dzakatarisana mukati dzinenge dzakaenzana zvakare. Chiumbwa ichi chine guramakonyo mbiri anochekana negonyo re 90o. Skweya iri pamupanda wegonyoina tsazamativi zvakare.
Gonyoina tsazamakonyo (Rectangle) - iri izwi rapiwa kureva chiumbwa chine makonyo mana ose akaenzana; gonyo rimwe nerimwe riine 90o. Mativi maviri akatarisana anenge akaenzana uye akati sambamba. Skweya rinogona kupinda pamupanda rechiumbwa ichi asi kazhinji tinosarudza kuti skweya rimire roga.
Gonyoina dzisiri gonyoina SambambaEdit
Gonyoina sambambiri (Trapezium, trapezoid) - sokutaura kwezita racho, chiumbwa ichi chine mativi mana; zvakare chine mativi maviri akati sambamba.
Kayiti (Kite) imhando yegonyoina ine peya (pair) mbiri dzemativi anotevedzana akaenzana. Izvi zvinoreva kuti guramakonyo rimwe rinokamura kayiti kuita gonyonhatu mbiri dzakaenzana; dzine chidzudzani (congruency).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonyoina&oldid=31699"
Last edited on 7 Kurume 2013, at 19:33
This page was last edited on 7 Kurume 2013, at 19:33.